Taliye Saldhig oo Musuq loo xiray. | Somali National Television - sntv.so
Home GARSOORKA Taliye Saldhig oo Musuq loo xiray.
Taliye Saldhig oo Musuq loo xiray.
Muqdisho (SNTV)- Gaashaanle Dhaxe Cabdirisaaq Soomana Xuseen oo ahaa taliyaha saldhiga Boliska degmada Wartanabadda iyo Alifle Cabdi Cumar Isaaq Baaraha Dambiyada Saldhiga iyo Kormeera Labaada Cabdifitaax Maxamuud Cabdi oo ka tirsana Ciidamada saldhiga degmada ayaa lagu soo eedeeyay in ay qaateen lacag laauush ah.
Kowda bishan aynu ku jirno ayaa Ciidamada Amniga soo xireen Eedeysanayaal Gaashaanle Dhaxe Cabdirisaaq Soomana Xuseen taliyaha saldhiga degmada Warta-nabadda , baaraha dambiyada saldhiga Alifle Cabdi Cumar Isaaq iyo Cabdifitaax Maxamuud Cabdi oo ka tirsanaa ciidamada saldhiga ayaa lala xiriirinayaa qaadasho lacag laaluush ah, waxaana markii ay soo xireen Ciidamada Amniga eedeysanayaasha kadib ku soo wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida .
Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa markii ay soo gaartay eedda ka dhanka ah eedeysanayaasha, waxa ay maalin kadib horgeeyeen Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Xeer Ilaalinta ayaa weydiisatay garsoorayaasha in la xiro si’ ay u soo dhameystiraan cadeymaha eedda loo heysto Gaashaanle Dhaxe Cabdirisaaq Soomana Xuseen oo ahaa taliyaha Boliska saldhiga degmada Wartanabadda iyo labada askari ee kala tirsanaa saldhiga degmada Warta-nabadda.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa xabsiga dhigtay taliyihii Boliska Saldhiga Warta-nabadda iyo laba askari oo kala tirsanaa saldhiga, waxa ayna fareen xafiiska xeer ilaalinta in ay soo dhameystiraan cadeymaha eedeysanayaasha.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirto sidii loo soo afjari lahaa Musuqa, Maxkamadaha rayidka iyo tan ciidamada qalabka sida ayaa la horgeeyay eeddo lala xiriirinayo Musuq-maasuq waxa ayna Maxkamadaha xabsiyada dhigeen eedeysanayaal loo heysto Laaluush iyo ku tagrifal awoodeed.
Previous articleQuruxda iyo dhaqanka qaaradda Afrika
Next articlePuntland oo dayactir ku sameysay mid kamid ah xarumaha maamulkaasi